10 Ihe nkiri na-adịghị ahụkebe n'ụwa niile | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Njem Europe > 10 Ihe nkiri na-adịghị ahụkebe n'ụwa niile
Zụlite njem Britain, Zụọnụ Travel China, Inzọ Njem Germany, Ụgbọ oloko njem Holland, Inzọ Njem Italytali, Ụgbọ okporo ígwè njem Scotland, Ingbọ ologo Spain, Zụlite njem Netherlands, Ụgbọ oloko njem UK, Njem Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 29/04/2022)
ndị a 10 ihe nkiri pụrụ iche n'ụwa niile ga-eju gị anya. Cinderella kpụrụ-elu ikiri ụkwụ ụka, ugwu nta, àkwà mmiri kwụsịtụrụ, na ọwara pụrụ iche na England – bụ naanị ole na ole n'ime ihe pụrụ iche na ntakịrị ihe dị egwu, ihe nkiri ị kwesịrị ịga na gburugburu ụwa.
1. Ihe nkiri na-adịghị ahụkebe n'ụwa niile: Balcony Juliet
Enwere mmadụ ole na ole na-amaghị na akụkọ Romeo na Juliette mere na Verona. Ọzọkwa, Ọ bụ mmadụ ole na ole na-amaghị ihe nkiri mbara ihu ihunanya. Otu n'ime ihe nkiri pụrụ iche ị ga-eleta na Verona bụ mbara ihu Juliet. mbara ihu bụ akụkụ nke ụlọ, where a Cappello family lived in the 13th century. Otú ọ dị, naanị mbara ihu a ma ama ka agbakwunyere n'ụlọ dị na 20nke narị afọ.
Na mgbakwunye, mbara ihu aghọwo otu n'ime ihe ndị kasị ama na Europe. Ebe mbara ihu ahụ enweghị ezigbo ọrụ na ntọala akụkọ Romeo na Juliet, ọ na-adọta ọtụtụ narị ndị ọbịa kwa afọ. N'ịhụnanya, obi gbawara, ndị nrọ na ndị na-anụ ọkụ n'obi Shakespeare, bia hapu ndetu ima ha, ọchịchọ, na graffiti na mgbidi n'okpuru mbara ihu Juliet.
Jiri ụgbọ oloko na Rimini gaa Verona
Iji ụgbọ oloko gaa Rom iji Verona
Florence na Verona Na ụgbọ oloko
Venice ka Verona jiri ụgbọ oloko
2. Farie Glen, Isle nke Skye
Ụdị cone, ugwu ukwu silky, ọdọ mmiri na mmiri mmiri gbara ya gburugburu, Fairy Glen bụ otu n'ime ebe a na-adịghị ahụkebe na Isle of Sky. Ọ bụ ezie na a maghị aha ahụ pụrụ iche, Odida obodo Fairy Glen nwere ịma mma pụrụ iche.
Ebe kacha mma maka nnukwu echiche nke Fairy Glen sitere na Castle Owen. Ebe a abụghị nnukwu nnukwu ụlọ, kama ọ bụ nguzobe nkume nke yiri nnukwu ụlọ si n'ebe dị anya. Fairy Glen dị obere; Ya mere, ọ kacha mma ijikọta ya na nleta Kilt Rock, Okenye nke Storr, na ọdọ mmiri Fairy.
3. Eletriki Ladyland Amsterdam
Ụlọ ihe ngosi nka nke mbụ nke fluorescent na ụwa, na eletriki Ladyland mma na Amsterdam bụ otu n'ime 10 ihe nkiri pụrụ iche na Europe. Ọ bụrụgodị na ị bụghị onye na-akwado ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, Ụlọ ihe ngosi nka nke fluorescent a bụ ahụmahụ dị ukwuu maka ụmụaka na ndị okenye. Na mgbakwunye na nchịkọta dị ịrịba ama nke mineral fluorescent, Ladyland na-ewepụta ihe osise fluorescent dị ịtụnanya site na 1950s. Ọzọkwa, ndị ọbịa na-enweta ohere dị oke ọnụ ahịa isonye n'ịmepụta ọrụ nka nke ha, na yi ìhè.
Mmasị a dị ịtụnanya dị n'ime etiti obodo Jordaan dị na Amsterdam, Ebe okpuru ulo gbara ọchịchịrị na-enwu n'ọkụ mara mma. Akpọrọ aha ya na album Jimmy Hendrix Electric Ladyland, mma a mara mma bụ ihe niile gbasara nka psychedelic na egwu 70. Obi abụọ adịghị ya, Ụlọ ihe ngosi nka Electric Ladyland dị na Amsterdam bụ otu n'ime ihe nkiri kacha atọ ụtọ n'ụwa.
4. Ọwara Bude, Cornwell England
Ọ dị ka ọwara rọba nkịtị n'ime ogige ụgbọ ala Cornwall, Ọwara Bude bụ ihe pụrụ iche. Mmasị a na-adịghị ahụkebe bụ otu n'ime n'elu 10 ebe nkiri na England ekele ọtụtụ puku LED ọkụ ọkụ na multicolor.
Dị n'obodo Bude na-ehi ụra, na 70 m ọwara bụ anwansi mgbe ọkụ. Oge kacha mma ịbịa bụ mgbede, maka ahụmahụ nke ìhè kacha. Mgbe Ọwara Bude na-adị larịị n'ehihie, n'abalị ọ na-aghọ ihe ịtụnanya ụwa, na-adọta ndị ọbịa si na Britain niile. Ndabere ala, Ọwara Bude nwere ike ịbụ a fun nkwụsị na njem gị gafee Europe, ebe ezi ihe ịtụnanya nke teknụzụ na-amụnye anya na obi nke ma ndị na-eto eto na ndị agadi.
5. Ihe nkiri na-adịghị ahụkebe n'ụwa niile: Spreepark Germany
nke Berlin ama mkpori ndụ mara oge ka mma, karịsịa na ọnụ ọgụgụ ya kacha elu 1969. Spreepark na-adọta 1.5 nde ndị ọbịa, iji gbaa ya 40 ụlọ 45-mita Ferris wheel. Speerpark bụ ebe kacha ewu ewu na East Germany ruo mgbe a ga-ejikọta ya na ya 1991.
N'elu ya, ndị ọbịa nwere ike ịnya igwe na-agba ara, Ukwu kaniyon mmiri ịgba ịnyịnya, na nnukwu iko na-agbanwe agbanwe. Ebe ogige ahụ tụfuru ewu ewu ya n'ihi mbelata, na agbahapụ, Spreepark nọgidere bụrụ ebe na-atọ ụtọ ileta na Berlin. Ọzọkwa, ogige ntụrụndụ a gbahapụrụ agbahapụ aghọwo otu n'ime ihe nkiri na-adịghị ahụkebe na Europe, enwere ike ịnweta ma ghe oghe nye ndị ọbịa na-achọ ịmata ihe.
Ọ bụghị anya na Shanghai, site na skyscrapers na ụlọ arụsị ochie, ị ga-ahụ amara ụkpụrụ ụlọ ọzọ na onyonyo nke obodo Bekee. Okporo ụzọ Cobblestone, ụka, etiti obodo etiti, na akara na-anabata gị na Thames Town.
Thames Town bụ akụkụ nke nnukwu atụmatụ imepụta ala ịta ahịhịa nke mba ụwa, mana atụmatụ ahụ abịaghị n'imezu. Ya mere, taa ndị ọbịa Shanghai nwere ike ịmasị ụfọdụ n'ime ha skyscrapers kacha dị egwu n'ụwa ma kwụsị ịgagharị n'obere akụkụ London na China.
Akwụsịla 100 mita megide mgbidi nke ọwa mmiri, Caminito del Rey bụ otu n'ime ebe kachasị mma na Spain. 2.9 km ụkwụ ụkwụ, 4.8 km uzo uzo, na 7.7 Ogologo kilomita Camino na-abụbu ụzọ ọrụ na-aga mmiri mmiri. Otú ọ dị, taa ọ bụ otu n'ime ihe nkiri nlegharị anya kacha atọ ụtọ na Malaga.
Otu n'ime ihe kpatara Caminito ji adọta ọtụtụ ndị njem bụ ọnọdụ ya. Tọọ n'akụkụ Los Gaitanes Gorge, Ọdọ mmiri dị ịrịba ama nke limestone na dolomite. Ya mere, n'agbanyeghị àkwà mmiri ndị dị warara na nghọta, Mmasị pụrụ iche Caminito del Rey bụ otu n'ime ebe a na-ahụrịrị na Andalucia, karịsịa maka ndị hụrụ adrenaline.
8. Giant Glass Slipper Church Taiwan
Meghere 2016, the high heel glass wedding church holds the Guinness record for the world’s largest high heel shoe-shaped structure. Nnukwu Slippa enyo bụ ebe agbamakwụkwọ ama ama mana enweghị ọrụ okpukperechi. Otú ọ dị, ụfọdụ nwere ike ịsị na nnukwu iko iko dị elu dị ka akpụkpọ ụkwụ Cinderella.
Ụka dị elu na Taiwan bụ 17.76 mita n'ịdị elu ma mejupụtara ihe karịrị 300 iko acha anụnụ anụnụ tinted, na-ahapụ mmetụta dị egwu n'ahụ ndị na-ahụ ya. Mmasị a na-adịghị ahụkebe dị na Ocean View Park dị na obodo Budai na Taiwan.
9. Ihe nkiri na-adịghị ahụkebe n'ụwa niile: Agha nke Orange Italy
Ememe nke Ivrea na-ewere ọnọdụ 3 ụbọchị tupu Fat Tuesday. Ememe a pụrụ iche na-ewetara ndị mmadụ ihe pụrụ iche “agha” okporo ụzọ na Ivrea, na-atụba ibe ya oroma. N'agbanyeghị ụda dị ka ọgụ nri na-atọ ụtọ, agha oroma nwere ike ime ihe ike, na ọtụtụ ndị sonyere na-ahapụ ọnya na mmerụ ahụ.
Emepụtara mmasị ime ihe ike ahụ n'ihi ihe omume ime ihe ike karịa. A na-ekwu na otu mgbe otu nwa agbọghọ na-agbapụ isi site n'ihe ọjọọ marquise. Ọ bụ ezie na o doghị anya ma ọ dị eziokwu ọ bụla na akụkọ a, ka o sina dị, ọtụtụ narị mmadụ na-aga oriri na ọṅụṅụ oroma kwa afọ. N'ihi ya, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe nkiri na-adịghị ahụkebe na Italy.
10. Upside Down House Fengjing Obodo ochie
Mmasị a na-adịghị ahụkebe bụ ihe pụrụ iche na obodo Fengjing oge ochie. A maara obodo ochie a ma ama na China maka ọwa mmiri ya, na kemgbe 2014 amaara ya maka ịbụ ebe obibi nke ụlọ Upsidedown. Mgbe ị na-abanye n'ụlọ ndị ọbịa nwere ike ịchọta ngwá ụlọ na ihe ụlọ, dị ka ụlọ elu dị na Poland.
Mgbe ị banyere n'ụlọ, ị ga-ahụ ihe niile gbadoro ụkwụ, ya mere ọ bụghị naanị na mputa. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe na-eme na nke a mma, a pụghị ịmasị mmadụ na ịmasị ya site n'ichepụta ụkpụrụ ụlọ a na-adịghị ahụkebe.
Anyị na Chekwa ụgbọ oloko ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem ndị a 10 ihe nkiri pụrụ iche gburugburu ụwa.
Ị chọrọ embed anyị blọọgụ post "10 Pụrụ Iche Mma n'ụwa nile" na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Funusual-attractions-worldwide%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#nkiri	pụrụ iche	UnusualAttractions	unusualattractionsworldwide
Njem ụgbọ oloko, Zụlite njem Britain, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Italytali, Luxembourg ụgbọ oloko, Zụlite njem Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Njem Europe
Zụọnụ Ndụmọdụ, Njem Europe
Ụgbọ okporo ígwè njem Austria, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland, Njem Europe